ClipDrop na-enye gị ohere idetuo ihe ndị dị adị na ekwentị gị ma mado ha na kọmputa gị | Gam akporosis
ClipDrop na-enye gị ohere idetuo ezigbo ihe na ekwentị gị ma mado ha na kọmputa gị
Site na igwefoto nke ngwaọrụ mkpanaka anyị, enwere ike ịse foto nke oke mma, mana ọ bụghị naanị iji debe ha na nchekwa. Ngwaọrụ ClipDrop na-aga otu nzọ ụkwụ na-aga, na-enye gị ohere idetuo ezigbo ihe na ekwentị gị na mado ya na komputa na ntabi anya.
Ngwa clones nke na-ajụ, na-echekwa ya na mgbe ahụ ọ ga-ahapụ anyị nhọrọ nke inwe ike ịnyefe ya na PC, maka nke a ka achọrọ ndị ahịa tinyekwara ya na ndị ahịa (Windows PC). Maka nke a, ọ dị mkpa iji otu akaụntụ ahụ wee banye na ngwa abụọ ahụ ma mekọrịta ihe osise ma ọ bụ ihe ndị eserese.
Ojiji nke imewanye ihe
ClipDrop ritere uru site na Eziokwu mepere emepe, dị ka Google Lens, ngwaọrụ ọzọ nke nwegoro ibu karịa oge, ọtụtụ nde mmadụ ebudatara. Onye PC na-enyekwa nke a ohere, mana igwefoto nke opekata mpe 720p ka achọrọ maka nke a.
Enwere ike ịtụle ya maka mpaghara dị n'èzí, ebe ọnụahịa nke ngwa ahụ na-egosi na ọ gaghị ahụ onye ọ bụla. Ngwa a ga - enye anyị ohere idetu ngụkọta nke ihe 10 n'ezie wee nyefee ha na PC, emesịa ọnụ ahịa ojiji ga-abụ euro 9,99 kwa ọnwa ma ọ bụ ihe dị ka euro 40 kwa afọ.
Na ClipDrop ị nwere ike iji ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ idezi foto dị iche iche nke ngwaahịa a na ịchọrọ ịre, na-eduzi ahia, ma ọ bụ nke anụ ahụ ma ọ bụ n'ịntanetị. Ha bụ ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ yiri ya, mana ekwesịrị ịsị na ikike ha nwere gafere nfe dị nfe n'etiti ngwa abụọ etinyegoro.
Mpempe akwụkwọ 10 nke ihe na-esonyere ụbọchị atọ nke iji nyocha, na nke a ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ya tupu ịzụta ya bụ nhọrọ ọzọ. ClipDrop clones ihe ọ bụla na igwefoto na ọ na-eme dị ka ọ na-abịa-hụrụ na ihe oyiyi weghaara oghere nke ngwaọrụ gị.
ClipDrop: onyonyo zuru oke
Developer: Malite ML
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » ClipDrop na-enye gị ohere idetuo ezigbo ihe na ekwentị gị ma mado ha na kọmputa gị
Ngwa Edomondo ga-akwụsị ịrụ ọrụ na Disemba 31, 2020
Ọ bụrụ na ejiri ekwentị gam akporo 7.1 jikwaa ekwentị gị, ị ga-agbanwe ya na 2021 ee ma ọ bụ ee